ABOn Amboo waliin walarge: Wow ! is it OBN???Lammaadhamoo Dr Abiyiitu afaan damma? - Kichuu
HomeAfaan OromooVideosABOn Amboo waliin walarge: Wow ! is it OBN???Lammaadhamoo Dr Abiyiitu afaan damma?
ABOn Amboo waliin walarge: Wow ! is it OBN???Lammaadhamoo Dr Abiyiitu afaan damma?
Artistoota kaayyoo fi Akeekaan jiraataniin faaruun Tokkummaa fi Alaabaa jedhu yeroo ummataaf faarfamu.
Tokkummaan faaruudha isin sirba jettuum yoona.
Artist Jaalallee Daadhii
Artist Falmataa kabbadaa
Artist Darajjee Beegii
Artist Shimallis Abbaabbuu
Artist Caalaa Daggafaa
Artist Mogoroo Jifaar
Waltajjii Magaalaa Amboo irratti Mudde 15/2019 .
Mootummaan Kolonel Abiy Ahmed n durfamu guyyaa har’aa meeshaa waraanaa gurguddoo konkolaatota gurguddootiin gadi guuraa oole. Dabalataanis loltoota konkolaataa oraalii 25 ol ta’an ergaan takkaa ganama kana gadi fe’ee jira. Waraanni kun utuu #WBO isa adamsuuf ba’e bosona lixee barbaada ta’ee homaa miti; kun hundi garuu daa’imman Oromoo, harmoolii Oromoofi qotee bultoota ajjeesuu, itti sagaagaluufi qe’eerraa buqqisuuf deemaa jira. Seenaaf olkaawwadhaa!!
Ambootti seenaan dalagame .
Mudde 15/2019 stadium magaalaa Amboo.
Baga kanaan nu gahe; kun haga dhufutti, dhaadannoon kun biyya alaa keessatti dhaadheffamaa ture; dhaadannoo kana Oromiyaa keessatti arguun carroomuu dha; hedduu itti gammanna. #FreeOromia
In one country What does it mean to have unequal treatment???What is the function of House of Federation in Ethiopia? https://t.co/yiSDIm5UWo pic.twitter.com/RKR3BadI3n
— Kichuu (@kichuu24) December 16, 2019
Fayyisaa Haayiluu – Hiibboo – New Ethiopian Music 2019 (Official Video)
Dr Abiy OBN akka sagalee ummataa dhossu godhee?
Kun #DAAWITII dhugaa biyya Itoophiyaa keessaa ti. Barattootni Oromoo akkanatti jiru!
Qabsoo keenyaan gidraa kana keessaa ni baana!!
ODM-Birhane Beka; ቢርሃኔ በካ (ጫልቱ ጋላ ኦነግ)መደመር ኢፕፕ-ብልጥግና ፓርት-Must Watch/Investment/New Ideology, 2019
Internaashinaal Kiraayisiis Giruup: Ce’umsa Itoophiyaa ‘hadiidarratti’ eeguu